Fanamafisana vita amin'ny plastika tsara indrindra Mpanamboatra fibre karbaona | Wanhoo
Izy io dia miorina, mitondra herinaratra, manosotra tena ary manamafy. Noho izany dia afaka mifangaro amin'ny resina, plastika, vy, fingotra sns. Noho izany dia afaka manamafy ny tanjaka sy mitafy fanoherana ny fitaovana izy io.
Izy io koa dia azo ampiarahina amin'ny thermoplastika injeniera ankapobeny (oh: PC, Nylon, sns.) Ary ny resina thermoplastic amin'ny hafanana avo lenta (oh: PEEK, PEI, sns.) ary ny tahan'ny hamafin'ny lanjany.
Ankehitriny dia ampiasaina amin'ny sehatra maro izy io. Ohatra: Chip électronique, mitarika lovia, mitarika gorodona, milina elektronika, indostria anti-static, sivana anti-static, indostrian'ny fiarovana, insulation building, simika.
CFRP dia fitaovana mitambatra. Amin'ity tranga ity, ny fitambarana dia misy fizarana roa: matrix sy fanamafisana. Ao amin'ny CFRP ny fanamafisana dia fibre carbon, izay manome ny heriny. Ny matrix dia mazàna resina polymer, toy ny epoxy, mba hamatorana ny fanamafisana. Satria ny CFRP dia misy singa roa miavaka, ny fananana ara-materialy dia miankina amin'ireo singa roa ireo.
Ny fanamafisana dia manome ny herin'ny CFRP sy ny hamafiny, refesina amin'ny tsindry sy ny modulus elastika. Tsy toy ny fitaovana isotropika toy ny vy sy aliminioma, ny CFRP dia manana tanjaka fitarihana. Ny fananan'ny CFRP dia miankina amin'ny fisehon'ny fibre karbaona sy ny habetsaky ny fibra karbaona mifandraika amin'ny polymer. Ireo fampitahana roa samy hafa mifehy ny volavola maoderina modulus amin'ny akora mitambatra amin'ny fampiasana ny fananan'ny kofehin'ny karbaona sy ny matrix polymer dia azo ampiharina amin'ny plastika nohamafisin'ny fibre carbon
Ity ambany ity ny vokatray amin'ny fampiharana plastika nohamafisin'ny fibre carbon
Sombin-tsolika karbonika thermoplastic misy PI / PEEK
tombony：Hery lehibe, modulus avo, fitaritana herinaratra
Fampiasana: EMI miaro, Antistatic, manamafy ny plastika injeniera
ara-nofo Carbon fibre & PI / PEEK
Votoatin'ny fibre karbaona (%) 97%
Atiny PI / PEEK (%) 2.5-3
Votoatin'ny rano (%) <0.3
Fiorenan'ny fitsaboana amin'ny tany 350 ℃ - 450 ℃
Fampiasana voatondro Nylon6 / 66, PPO, PPS, PEI, PES, PPA, PEEK, PA10T, PEKK, PPS，PC, PI, PEEK
Teo aloha: Zipo tranofiara-Thermoplastic
Manaraka: Carbon fibre nahatsapa lamba firakotra Carbon lamba firakotra